Banyere Anyị - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Shenzhen LANTAISI Technology Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2016 nke mejupụtara otu ndị ọrụ nka na ahịa nwere ahụmahụ bara ụba na chaja ikuku ekwentị. The technicians, ndị nwere 15 ~ 20 afọ ahụmahụ na mmepụta management, technology mgbanwe atụmatụ na mara-how na wireless chaja ubi, si Foxconn, Huawei na ndị ọzọ ama ụlọ ọrụ. Anyị na-echepụta, rụpụta, nye ma na-ere akụrụngwa chaja ikuku dị ọnụ ala maka smartphones, ntị ntị TWS na elekere smart, ma na-enye azịza chaja ikuku ọkachamara. Anyị bụ onye otu WPC na onye otu Apple na ngwaahịa anyị niile dakọtara na ọkọlọtọ Qi.
Anyị agafeela CE, ISO9001, ISO14001, FCC, MFI, BSCI asambodo. Anyị bụkwa onye otu QI na USB-IF.
"Emere na China" abụrụla usoro B2B anyị kemgbe 2020. Anyị agafeela nyocha ụlọ ọrụ site na "Mere na China".
Ebumnobi anyị bụ ịghọ “Onye nrụpụta ọgụgụ isi” nke klaasị mbụ nke ụdọ ọkụ na ngwaahịa eletrọnịkị mkpanaka, anyị na-agba mbọ ịchọpụta teknụzụ kachasị elu kwa afọ. Anyị nwere ike ime OEM na ọrụ ODM dị omimi maka ndị ahịa anyị bara uru ma anyị ji n'aka na anyị ga-enyekwu uru maka ndị mmekọ anyị.
Ka ọtụtụ afọ nke mmepe ngwa ngwa gasịrị, agbasawanye azụmahịa anyị na ahịa ụwa dị iche iche, dị ka China China, Japan, South Korea, Middle-East, Southeast Asia, Europe, United States na mpaghara ndị ọzọ. Anyị na-achọ nkwado dị mma na gị ndị ahịa a na-akwanyere ùgwù.
Teknụzụ na ngwaahịa
Ụdị ngwaahịa: Pad, nkwụnye, mgbago ụgbọ ala, 2 na 1, 3 na 1, multifunctional composite na onye PCBA chọrọ
Nchaji ngwaọrụ nkwado: SmartphoneS, ntị ntị TWS, smart smart, wdg
Ụdị Nchaji: Ikuku/Inductive/Ukuku
●Ihe omume na 2016
▪ R & D nke chaja ikuku ekwe ntị
●Ihe omume na 2017
▪ Bụrụ ndị mbụ so na WPC Qi Association
●Ihe omume na 2018
▪ Ewepụtara chaja ikuku ụgbọ ala n'ahịa ma guzobe ụlọ ọrụ mgbakọ dum, nke na-eme ka ikike nrụpụta na ikike OEM dịkwuo elu.
● Eihe ọhụrụ na 2019
▪ Nchaji ikuku ngwa ngwa nke usoro EPP etinyere n'ahịa
▪ Asambodo ISO9001
● Ihe omume na 2020
▪ Bụrụ onye otu Apple
▪ A na-enweta ma nyochaa akwụkwọ MFI maka chaja Apple watch (iwatch) site n'aka ụlọ ọrụ Apple
Company si ngalaba-nchoputa Mr.Peng na Mr. Li wdg, nwere ihe karịrị 15 afọ ọgaranya usoro iwu na bara uru ahụmahụ mobile electronics ubi. Ha maara nke ọma na teknụzụ chaja ikuku ga-abụ ihe dị mkpa a chọrọ maka ndụ ndị mmadụ ma wuo otu iji zụlite na imepụta ha. Mgbe ihe karịrị afọ ise mmepe, anyị na-aghọ a WPC so na onye Apple so, anyị toro ruo a ike na ọnụ ọgụgụ ike factory na wireless Nchaji ụlọ ọrụ.
Site n'ịkwalite mmepe teknụzụ chaja ikuku, ngwaahịa chaja ikuku ga-abanye ọtụtụ ezinụlọ na ebe ọrụ. Anyị ga-agbalịsi ike ịnye ndị mmekọ na ndị na-arụkọ ọrụ anyị ngwaahịa na ngwọta dị mma karị. Na n'ihu iji welie uru gị.